साना र सिमान्तकृत किसानलाई सहुलियत दरमा ऋण दिने : कृषि सचिव डा. कार्की — Arthatantra.com
Arthatantra.com > Headline > साना र सिमान्तकृत किसानलाई सहुलियत दरमा ऋण दिने : कृषि सचिव डा. कार्की
साना र सिमान्तकृत किसानलाई सहुलियत दरमा ऋण दिने : कृषि सचिव डा. कार्की
काठमाडौं । कृषि क्षेत्रका विज्ञ तथा व्यबसायीहरुले व्यबसायीक कृषिका लागि उत्पादनमुलक कार्यक्रम र नीतिको खाँचो औल्याएका छन् ।
कृषिको बजेट र अनुदानमा समानताको आवश्यकतामा विज्ञको जोड छ । मिडिया इन्टरनेसनलले आयोजना गरेको वेवीनार कार्यक्रममा यस्तो जोड दिइएको हो ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव डा.योगेन्द्र कुमार कार्कीले मन्त्रालयले साना र सिमान्तकृत किसानका लागि सहुलियत दरमा ऋण उपलब्ध गराउन पहल गरिरहेको बताउनुभयो ।
‘मन्त्रालयले १० लाख भन्दा कम रकम सहुलियत व्याजदरमा किसानलाई उपलब्ध गराउने विषयमा बैंकहरुसँग छलफल गरिरहेका छौं’ उहाँले भन्नुभयो ।
कृषि बीमाको कभरेजलाई कसरी बढाउने भन्नेमा आफुहरु लागि परेको भन्दै सचिव कार्कीले कृषिज्ञान केन्द्र मार्फत यस विषयमा किसानहरुलाई सूचना दिनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा अनुदानको दायरा एउटै हुनुपर्ने भन्दै यसले एक रुपता आउने र दोहोरपना घट्ने बताउनुभयो ।
उहाँले कोभिड-१९ को कारण कृषिमा परेको असरलाई कसरी समेटेर लैजाने भनेर मन्त्रालयले योजना बनाएको बताउनुभयो । विदेशी राष्ट्रले गरेका कृषिका प्राटिक्सलाई सिक्दै अगाडि बढाउँदै जानुपर्ने उहाँको भनाई छ । उहाँले प्राङ्गारिक, जैविक मल लगायतका कृषि सम्बन्धी राम्रा कार्यक्रमहरु आएपनि त्यो प्रयाप्त भने नभएको बताउनुभयो ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७-७८ का लागि कृषि क्षेत्रमा विनियोजन गरेको बजेट तुलनात्मक रुपमा सन्तोष जनक रहेको उहाँको भनाइ छ । आर्थिक अध्यादेश प्रमाणीकरमा सरकारले कृषकहरुलाई छुटको दायरा बढाएको बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपालका अध्यक्ष पवन गोल्यानले कृषि क्षेत्रमा साना किसानको विकासमा टेवा पु¥याउनु आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
उहाँले सरकारले कृषिमा छुट्याएको बजेट वास्तविक कृषकसम्म पुग्न नसकोको बताउनुभयो । कृषिमा सीप, मल, कृषियन्त्र, सिँचाइको अभाव र बजारीकरणको समस्या रहेको भन्दै बजेट जतिसुकै आएपनि केहि नहुने बताउनुभयो । उहाँले कृषिको प्रशोधन, उत्पादन भएका बस्तुको बजारीकरणका लागि संरचना बनाउनुपर्ने बताउनुभयो ।
कृषिकर्जा प्रवाहमा आफूले पनि सक्दो सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्तगर्दै उहाँले कृषिकालागि आन्दोलन नै आवश्यक भएकोमा जोड दिनुभयो । ‘उत्पादनगर्ने व्यक्ति सबै समान छन्् सबै कुराको विकास भयो, तर उत्पादन र कृषिको व्यबसायमा विकास भएन, यसका लागि आन्दोलन नै गर्नु परेपनि म तयार छु’
कार्यक्रममा कृषि उद्यमी गुणचन्द्र विष्टले कृषिको बजेट परम्परागत भन्दा माथि जान नसकेको बताउनुभयो । उहाँले सरकारले ल्याएको बजेटमा पैसा थुपार्ने भन्दा केहि नयाँ कार्यक्रम नदेखिएको उल्लेख गर्नुभयो । ‘कृषिमा बजेट केहि पनि छैन, ६० प्रतिशत कृषिमा आश्रीत हुँदा बजेट ३ प्रतिशत पनि छैन’ उहाँले भन्नुभयो ।
कफी व्यबसायी महासंघका संस्थापक अध्यक्ष एवं कफी उद्यमी ढकेश्वर घिमिरेले कफि क्षेत्रमा नीतिगत, अनुसन्धान तथा उत्पादन बढाउने विषयमा समस्या भएको बताउनुभयो ।
२०७८ जेष्ठ २० गते १०:१४ मा प्रकाशित
छुट्ला है निर्धन उत्थान लघुवित्तको सेयर, आज आवेदन दिने अन्तिम दिन
२७ लाख १६ हजार कित्ता बोनस शेयर नेप्सेमा सूचीकृत
एक केजी चरेशसहित धादिङका तामाङ पक्राउ
पटका पड्काउँदा ३२ लाख जरिवाना !
प्रधानमन्त्री ओली राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई भेट्न शीतल निवासमा